फेसबुकबाट नचिनेको मान्छेसँग प्रेम सम्बन्ध पुग्एपछि…
पाेखरा। जीवनमा मैले ठूलोठूलो उद्देश्य लिएकी थिएँ।
फेसबुकमा जस्तो पायो त्यस्तै मान्छेलाई मैले भाउ नदिने भएकाले कम साथी थिए। एक दिन म्यासेन्जरमा नचिनेको मान्छेले कुरा गर्न खोज्यो।
म कसैलाई भाउ नदिने मान्छेले उसप्रति खै किन किन कुरा गरुँ गरुँ लागेर आयो। हाई हेल्लोबाट कुरा सुरु भएको थियो तर कुन बेला हाम्रो बोलीचाली भयो र कुन बेला प्रेम सम्बन्ध सम्म पुग्यो, आफैँलाई थाहा भएन।
मैले फोटो पठाउनु भन्दा पनि जहिल्यै आनाकानी गथ्र्यो।उसको बसाइ कैलालीमा थियो। म अहिले विदेशमा नै छु। केटाले पैसा पठाइदे भनेर टर्चर दिइरहन्छ। मामुले त्यस्ता शोषकीसँग दुरी राख्न सुझाव दिइस्या हुनाले आफ्नो खातामा पैसा बचाएर राख्न थाले की छु।उसले मेरो घरमा फोन गरेर तिम्री छोरी भगाएँ भनिसकेछ।
हामी गहिरो प्रेममा भएको अनुभूति भएको दुई वर्षपछि भेट भयो। हेर्दा त इमरान हासमी जस्तै रै’छ। यो लगाएर ठीक पर्नु।’ आफ्नो विवाहमा मान्छे खुसी हुन्छन् तर यो खबर सुनेर मलाई नरमाइलो लाग्यो। म त छाँगाबाट खसेजस्ती भएँ।मैले प्रेमीलाई भनेँ, ‘अहिले हाम्रो उमेर नै के भएको छ र ? हाम्रो विवाह गर्ने बेला पनि भएको छैन।’ उसले मेरो कुरा सुन्दा पनि सुनेन।
अब म के भनेर यो विवाहको प्रतिरोध गरौँ। आखिर म पनि त बुबाआमालाई झु क्याएर अनि साथीसँग टूरमा जान्छु भनेर छलेर केटाको पछि लागेकी थिएँ!अब बिहे गर्नुबाहेक मसँग कुनै बाटो थिएन। मलाई यस्तो लाग्यो, ऊ साँच्चिकै मेरो जीवनको हिरो हो। हेर्दाको आकर्षक, मृदु भाषी र सधैँ सँगै रहिरहूँ लाग्ने मन।उसलाई देखेपछि भने मैले मेरो सारा हद तोडिदिएँ। मैले घरमा पनि उसका बारेमा बताएँ। म भर्खर १८ वर्ष पुगेकी थिएँ।
प्लस टु सकेर सानोतिनो काम गर्न थालेकी थिएँ। काठमाडौँ आएपछि ऊ मलाई भेटिरहन्थ्यो। एक दिन बाहिर घुम्न जाउँ भनेर जिद्दी ग-यो।’मेरो रोईकराई देखेर बाबा–मामुले मलाई विदेश पठाइदिस्यो। जब मेरा बुबाआमालाई पनि यो कुरा थाहा भयो, मेरो सबै किसिमको जाँगर म*रेर आयो। यतिबेला मेरो हालत कस्तो छ भने नेपाल फर्केर न म त्यो केटासँग बस्न सक्छु न त विदेशमा एक्लो जीवन बिताउन सक्छु।
मलाई पनि त ऊसित बाहिर कतै घुम्न जाउँ भन्ने रहर नलागेको होइन तर घरमा मैले के भनेर ढाँट्ने ? तैपनि अफिसको टुर छ भनेर घरमा ढाँटेँ। कैलालीमा उसको फुपूकोमा लिएर गयो। भोलिपल्ट उसकी फुपूले मलाई झोलाभरि कपडा ल्याएर दिइन् र भनिन्, ‘लु, आज तिम्रो बिहे छ। म काठमाडौँमा हुर्केकी केटी, मलाई घरका कामहरु खासै गर्न आउँदैनथ्यो।
महिलाको जीवन यस्तो पनि हुँदोरहेछ भन्ने पहिलो पटक मलाई लाग्यो। बिहानदेखि बेलुकासम्म रत्तिभर म खाली हुन पाउँदिन थिएँ। उसका घरकाले पनि मानौँ काठमाडौँमा मेरो घर हुनु ठूलो पाप भएजस्तै दाइजो खोज्थे। अत्ति भएपछि म दशैँको मौका पारेर काठमाडौँ आएँआफू ले गरेको दुव्र्यवहारप्रति माफी माग्दै मैले मामुलाई भनेँ, ‘म घर जानुभन्दा बरु मर्न निको ठान्छु। बरु मलाई विदेश पठाइदिस्यो ! म कैलालीमा छदाँ नै उसले अर्कै गर्लफ्रेन्ड बनाएको थियो। उसको काम नै केटी फकाउने पो हो कि भन्ने मलाई शंका लागिरहेको छ।
एक किसिमले भन्ने हो भने मैले मीठामीठा कुरामा आफूलाई सुम्पेर ठूलो गल्ती गरेँ र त्यसबाट ठूलो पाठ पनि सिकिसकेँ। यतिबेला ऊ मेरो मनबाट निकालामा परिसकेको छ। यस्तो भइसक्दा पनि उसले मलाई पनि धम्की दिन छाडेको छैन। म के गरौँ ?स्रोतः नेप्लीज टिन एजर कन्फेसन। मानौँ, दाइजो तिनको हक हो र काठमाडौँले तुरुन्तै तिनको दाइजो दिइहाल्छ।अब त परिवार नै एक मुख लागेर पैसा माग भन्थे।घरकाले त भन्थे नै,मेरो सपनाको प्रेमी ठानेको व्यक्तिले पनि उसरी नै माग्थ्यो र कहिलेकाहीँ त कु*टपि*टमै उत्रन थाल्यो।